वीपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकद्वारा सामुहिक राजीनामा दिने चेतावनी (भिडियो सहित)
धरान । विगत एक साता देखि आन्दोलनमा रहेका वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले सामुहिक राजिनामा दिने चेतावनी दिएका छन् । प्रतिष्ठानमा बढ्दै गएको अनियमितताका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका चिकित्सकहरुको आन्दोलन एक साता सम्म पुग्दा पनि उपकुलपति काठमाण्डौंमा बसेर आन्दोलन दबाउन खोजिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले सामुहित राजिनामा दिने चेतावनी दिएका छन् । आज सातौं दिन प्रतिष्ठानमा क्षेत्रमा विरोध र्याली प्रदर्शन पछि उपकुलपति कार्यालय अघि विरोध सभा गर्दै संयुक्त संघर्ष समितीका संयोजक डा. एसपी रिमालले दुई वटा कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । उनले भने, ‘संयुक्त संघर्ष समितीले छलफल गरेर अल
प्रकाशित मितिः असार ७, २०७८
1,078 पटक पढिएको
लघु चलचित्र तिरस्कार सार्वजनिक
धरान / संचारकर्मी सुविन विश्वकर्माको लेखन तथा निर्देशन रहेको लघुचलचित्र ‘तिरस्कार’ रिलिज भएकोछ । जातीय विभेद तथा अन्तरजातीय प्रेमको कथालाई मुख्य आधार मानेर तयार भएको ‘तिरस्कार’ लाई विश्वकर्माकै युटुब च्यानल सुबिन विश्वकर्मा लुते युट्युब च्यानलबाट रिलिज गरिएको हो । जातीय विभेदका विरुद्धमा कुनै न कुनै तवरबाट आवाज उठाइरहेका विश्वकर्माको यो चलचित्र डेव्यु निर्देशन् हो । जातीय विभेद तथा अन्तरजातीय प्रेममा आधारित ‘तिरस्कार’ ले हाम्रो समाजमा अन्तरजातीय प्रेम र विवाहमा आइपर्ने समस्या र चुनौती गज्जवले प्रस्तुत गरिएको छ । ‘तिरस्कार’ को कथा मार्फत केही मात
प्रकाशित मितिः जेठ २७, २०७८
गंगा गजमेरको ‘नरहे यो जिन्दगी’ सार्वजनिक
सुनसरी । ‘स्वरादि’ एल्बम बजार ल्याएर सांगितिक क्षेत्रमा चर्चा कमाएकी गायिका गंगा गजमेरको नयाँ गित ‘नरहे यो जिन्दगी’ सार्वजनिक भएको छ । आधा दर्जन गितहरु बजारमा ल्याईसकेकी गजमेरले नयाँ गित ‘नरहे यो जिन्दगी’ बोलको गित बजारमा ल्याएकी छिन् । म्युजिक भिडियो सहित उनको गित गत शुक्रबार युट्युब च्यानल मार्फत बजारमा आएको छ । गोलो प्रडक्सन नामक युट्युब च्यानलले ल्याएको गजमेरको ‘नरहे यो जिन्दगी’ गीतमा गोपाल लोहारको शब्द, मानशी किरणको संगीत तथा संगीत संयोजन रहेको छ । गीतको म्युजिक भिडियोमा रोश्नी कार्की र सञ्जय विश्वकर्माले अभिनय गरेका छन् । उत्तर रानामगरको
प्रकाशित मितिः फाल्गुन १४, २०७७
1,296 पटक पढिएको
बालगायक संदेश पौडेलको मेरी आमा म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
इटहरी । भर्खरै गायन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका बालगायक संदेश पौडेलको आवाजमा ‘मेरी आमा’ बोलको नयाँ म्युजिक भिडियोे सार्वजनिक भएको छ । प्रिज्मा रेकडिङ स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको गितलाइ म्युजिक भिडियोको रूपमा भने राजकुमार कुवंर र गोबिन्द दुलालले निर्देशन गरेकाले गरेका छन । संदेश पौडेल र बरिष्ठ गायीका संगीता प्रधान राणाको स्वरमा रहेको म्युजिक भिडियोलाइ सह निर्देशनमा बिशाल केसी, छायाँकनमा अनिल जिसि, सम्पादन सिमली मिडियाले गरेको छ भने श्रृगारमा डेनि कोइराला रहेकी छिन । गितको रेकर्डिङ केहि दिन अघि सकिएपनि म्युजिक भिडियो भने भर्खरै बजारमा आएको मेरी आमा गीतका निर्देशक राजकुमार कुवरले बताए । त्यस
प्रकाशित मितिः आश्विन २९, २०७७
कृषिनै उत्तम विकल्प : सामाजिक विकाश राज्यमन्त्री गजमेर (भिडियो सहित)
धरान । कोरोनाको महामारीले अस्तव्यस्त बनाएको देशको अवश्थालाई पुरानै अवश्थामा फर्काउन कृषि पेशानै उत्तम विकल्प रहेको प्रदेश नम्बर १ की सामाजिक विकाश राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले बताएकी छिन् । विगत ७ महिना देखिको कोरोनाको महामारीले प्रभावित बनेका अन्य पेशाहरु उठ्नै नसक्ने गरि थलिएको बेला कृषिले देशकै अर्थतन्त्र उठाउनमा टेवा पुग्ने उनले बताईन् । सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षण गर्न लागु गरेको सहुलियत दरका ऋण तथा अनुदानलाई सही सदुपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने सामाजिक विकाश राज्यमन्त्री गजमेरले जोड दिइन् । उनले शनिबार मोरङको बेलवारी ६ मा संचालन रहेको बोराबाद बंगर फार्
1,488 पटक पढिएको
कोरोना संस्कार लागु गनुपर्छ : प्रजिअ पोखरेल (भिडियो सहित)
धरान । विपदको जोखिमको हिसाबले सुनसरी संवेदनशिल क्षेत्र रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । बाढी, पहिरो र सवारी दुर्घटना सहितको विपदको जोखिममा सुनसरी संवेदनशिल रहेको विपद पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना सुनसरी २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिती सुनसरीले सार्वजनिक गरेको योजना पुस्तकमा जिल्लामा १० भन्दा बढी प्रकारका प्रकोपहरु हुने गरेको देखिएको छ । पुस्तकको आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि प्रदेश नम्बर १ का सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारी र समितीका संयोजक सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख फणिन्द्रमणी पोखरेलले लोकार्पण गरेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुनसरीको प्राविधिक सहयोगमा
प्रकाशित मितिः भदौ २१, २०७७
1,422 पटक पढिएको
डायलासिस गरेका व्यक्तिमा कोरोना देखिए पछि, संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका स्टाफ नर्सहरु चिन्तित ( भिडियो सहित)
धरान । गत शुक्रबार वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मेडिसिन विभागमा डायलासिस गराएका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिए पछि कार्यरत स्टाफ नर्सहरु चिन्तीत बनेका छन् । कोरोना संक्रमण देखिएका व्यक्तिको दुई दिन पछि आएको रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो । त्यस बिचमा धेरै बिरामीहरुको डायलासिस गरिएको छ भने काम गर्ने स्टाफ नर्स सहित कर्मचारीहरु पनि परिवारको सम्पर्कमा रहेका छन् । तर प्रतिष्ठानले उनीहरुको सुरक्षाको निम्ती कुनै पनि व्यवस्थापन नगरिदिएको डायलासिसमा कार्यरत स्टाफ नर्सहरुको गुनासो छ । नयाँ व्यक्तिको कुनै पनि कोरोना परिक्षण नगरी डायलासिस गर्दा अहिले अन्य बिरामीहरुको पनि डायलासिस सेवा रोकिएको
प्रकाशित मितिः भदौ ९, २०७७
3,593 पटक पढिएको
उच्च जोखिममा सेवा दिदै वीपीका स्टाफ नर्स (भिडियो सहित )
धरान । अस्पतालमा फ्रन्टलाइनमा बसेर बिरामीलाई सेवा दिने स्टाफ नर्सहरुनै कोरोनाको जोखिममा रहेका छन् । धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको आइसियुमा रहेका दुई जना कोरोना संक्रमित बिरामीहरुको मृत्यु भए पछि झन उनीहरुमा कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेका छन् । दिनहुँ बिरामीहरुको नजिक रहेर काम गरिरहेका उनीहरु ड्युटी सकिए पछि घर जानुपर्छ उनीहरुको घर पनि असुरक्षित नै हुन्छ । उनीहरुको सुरक्षाको लागि सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ । न त प्रतिष्ठानले उनीहरुको सुरक्षा सँगै पिसिआर जाँच तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिदिएको छ न त नर्सहरुको सँस्थाले नै उनीहरुको लागि कुनै पहल गरिदिएको छ । सोमब
प्रकाशित मितिः भदौ ८, २०७७
1,682 पटक पढिएको
सार्वजनिक भयो बिमलाको “चट्ट कपाल कोरी” बोलको तिज गित (भिडियो सहित )
इटहरी । आधा दर्जन बढी गतिमा स्वर दिइसकेकी पुर्वको चर्चित गयिकाको रुपमा चिनिदै आएका ईटहरीकी गयिका बिमला गुरुङको तिजको नयाँ गित सार्वजनिक भएको छ । उनको “चट्ट कपाल कोरी” बोलको नयाँ तिजको गित हालसालै सार्वजनिक भएको हो । अहिले तिजको गितमा बिकृति बढ्दै गएको र तिज नेपाली नारीहरुको महानचाडको महत्तव हराउन नदिन यो गित सार्वजनिक गरिएको गायिका गुरुङले बताईन् । नरेश खड्काको शब्दमा रहेको गीतमा कुन्दन राईले संगीत भरेका छन् । दिनेश राईले खिचेको उक्त भिडियो श्री कुमार साम्पाङले निर्देशन गरेका छन् ।
2,186 पटक पढिएको
मेयर खनालद्वारा कोशी नदीको अवलोकन, सतर्कता अपनाउन निर्देशन( भिडियो सहित)
वराहक्षेत्र / वराहक्षेत्र नगरपालिकाका नगर प्रमुख निलम खनालले सप्तकोशी नदीको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ११ वटा वडा मध्ये वडा नं. ३, ४ र ५ बाहेक सबै वडा सप्तकोशी नदीको उच्च जोखिममा छन् । सोमबार सुनसरीका प्रहरी प्रमुख र प्रहरी अधिकृतहरुले समेत कोशी नदीको अवस्था बारे स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । भारतीय जल संशाधन विभागका कर्मचारीहरु समेत अनुगमनका क्रममा उपस्थित रहेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । सोमबार बिहान ९ बजेसम्म सप्तकोशी नदीको वहाव ३ लाख ४४ हजार ९ सय ९० क्युसेक पुगेको कोशी ब्यारेजस्थित कन्ट्रोल रुमले जानकारी दिएको छ । वराहक्षेत्र नगरपालिकाका नगर प्रमुख निलम खनालले
1,751 पटक पढिएको